Sidee u raadin kartaa fiidiyooga saaxiibtinimada leh ee ku biiri kara ololeyaal suuq-gelyo leh
Tobankii sano ee la soo dhaafay, videos wuxuu noqonayaa farsamo suuq geynaya oo u sahli kara milkiilayaasha bogagga inay soo jiidato macaamiishooyin badan oo suurtogal ah oo kor u qaada dakhligooda. Caan ka ah kor u qaadista fiidiyowga ayaa kaliya loogu talagalay in ay sii korodho. Waqtigan xaadirka ah, sida ku cad xogta tirakoobka, in ka badan 60% ganacsatada internetka waxay isticmaalaan qalabyada sida qalabka suuq-geynta, oo lagu dhejiyo fiidiyow-raadiyoo raadsan dhowr jeer asbuucii. Waxyaabaha fiidiyoowgu wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 64% dhammaan taraafikada webka, waxaana la saadaalinayaa in ay koraan ilaa 80% dhammaan taraafikada internetka. Lambarradan waxaa lagu sharxi karaa dadka isticmaala aragtida video. Waa mid gaaban, jahwareer leh oo la xasuusan karo, si fudud ayaa loo arki karaa dadka isticmaala da 'kasta iyo jinsiga - rent a computer with.
Sababta ugu weyn ee koritaanka degdegga ah ee xayeysiinta fiidiyowga waa waxtarka noocan ah ee dhiirrigelinta. Waxaad soo gudbin kartaa tan oo ah macluumaad qiimo leh oo ku saabsan hadafyada ganacsigaaga iyada oo loo marayo fiidiyo fidsan oo gaaban.
Qodobkani, waxaan ka jawaabi doonaa su'aalaha waxa uu ka dhigayo fiidiyoow xoog leh ee suuq-geynta iyo maxay yihiin siyaabaha lagu soo jiidan karo dhagaystayaasha lala beegsado iyada oo loo marayo fiidiyow raadiye caan ah.
Sidee ganacsigaadu uga faa'iideysan kartaa darajada YouTube?
Youtube waa mida labaad ee ugu weyn raadinta adduunka ka dib Google. Ku dhowaad qof kasta oo ku jira meeraha ugu yaraan hal mar ayaa adeegsaday app this ujeedooyin raadin iyo madadaalo. Sida laga soo xigtay xogta tirakoobka, dadka isticmaala maalin walba waxay daaweeyaan boqolaal malaayiin saacadood ah oo fiidiyoow ah oo ku yaala YouTube, iyaga oo keenaya taraafikooyin badan oo la beegsanayo. Taasina waa sababta ay u joogitaan xooggan u tahay mareegtan warbaahintu kuu keeni karto qiimo badan oo ah qaabka gaadiidka iyo dib u celinta.
Iyada oo la adeegsanayo fiidiyowga fiidiyowga, waxaad tusi kartaa macaamiisha si sax ah waxa ay rabaan inay wax ka ogaadaan alaabtaada ama adeegyadaada. Waxaad tusi kartaa dhinac kasta ee alaabtaada iyo sida ay u noqon karaan wax qiimo leh iyaga. Tusaale ahaan, haddii aad dharka tafaariiqeed, waxaad muujin kartaa macaamiishaada iman kara sida ay u egyihiin nolol maalmeedka ama sida ay dadku isugu dari karaan waxyaabaha kala duwan ee shaqaalaha ee aad tafaariiqda. Markaa, halkii aad moodi lahayd macaamiishaada sawir muuqaal ah ama u siinaya mawduuc adag oo qoraal ah, waxaad soo bandhigi kartaa dhammaan macluumaadka faa'iido leh, kuwaas oo ku dhiirigeliya inay raacaan xiriirkaaga domain-ka iyo samaynta amar, hal raadin.
Diirad gaar ah waa in lagu xusuusnaado cinwaankaaga faahfaahinta iyo sharaxaadda maxaa yeelay waxay ka caawineysaa macaamiishaada iman kara inay ka helaan waxyaabaha aad kuhesho ee YouTube. U hubso inaad isticmaasho qaar ku habboon shuruudaha raadinta suuqyada ee sharaxaadda video. Intaa waxaa dheer, isku day inaad sameyso sharraxaadkan gaaban, oo ku habboon oo ku hawlan.
Isticmaal CTAs fiidiyoogaaga si aad u dhiiri geliso ilaaliyeyaashu inay gujiyaan ilaa boggaaga bogga ee YouTube iyo ka dibna domainkaaga hoose.
Si loo wanaajiyo waqtigaaga daawashada videogaraada, hubso in waxyaabaha aad u qalantaa daawashada. Marka ugu horeysa, fiidiyowgaagu waa inuu ahaadaa mid ku habboon su'aalaha raadinta ee isticmaalaha waxana ku jira qaar ka mid ah macluumaad qiimo leh, laakiin ma ahan kaliya macluumaadka xayeesiinta.
Calaamadaha waxay ku talinayaan in ay sameeyaan faallooyin ku saabsan laba nooc oo fiidiyoow ah - dareenka iyo waxbarashadaba sida ugu wanaagsan ee fiidiyowyada ah kuwaas oo keena dadka isticmaala dareen diimeed iyo kuwa dadka bara sida wax loo qabto. Iyada oo loo marayo labada nooc ee fiidiyowga fiidiyowga, waxaa laga yaabaa inaad abuurto olole suuq ah oo ku saabsan YouTube iyo soo jiidanaya dhageystayaashaada la beegsanayo boggaaga.